Dhaqtar Yiri” Laga Bilaabo Birri ragga Uur wey qaadi karaan weyna dhali karaa(Ogow Sababta) | Xaqiiqonews
Cilmi baaraha caanka ah ahna saynisyahanka lagu magcaabo Richard Paulson ayaa muusjiyey sida uu ugu qanacsanyahay in dhawaan la heli karo qaab cusub oo ay uur ku qaadin karaan ragga arintaasi oo uu sheegay in laga bilaaba biriba ay dhaqan gali karto.
Wargeyska” The Independent” ayaa faafiyey wareysi lala yeeshay madaxii hore hay,adda caafimaadka Dhalmada Mareekanka Richard Paulson oo sheegay in uu aaminsanyahay in ragga ay awoodaan in ay uur qaadaan isla markaana ay dhalaan.
Isagoo ka hadlaayey shirka sanad laha ah ee hay,adda dhalmada u qaabilsan mareekanka ugu socday magaalada
San Antonio ayuu yiri”laga bilaabo biri uur ayaad qaadi kartaan waadna dhali kartaan mana jiro wax arintaasi diidaya oo hadda noo muuqda.
Paulson ayaa tilmaamay in loo baahanyahay in ragga lagu beero Ilmo galeen “eutrus” si ay ugu suurta gasho in ay uur qaadaan isla markaana lagu duro hormones sidoo kale waxaa uu sheegay in uur qaadista ka dib dhalmada ay tahay mid fudud iyadoo la isticmaali doono Qaliin fudud madaama hab abuurista ragga aysan ogalaaneyn in si caadi ah ay u dhalaan.
hadda waxaa dunida ka ka jirta ilaa sagaal tijaabo oo guuleystay oo Raxim(ilmo galeen) beeris ah balse dhamaantood waxaa lagu sameeyey dumar hase ahaatee raxim beeristan cusub ayey dhaqaatiitu daneynayaan madaama ay sii badanayaan dadka badasha jinsigooda(ragga dumarka iska dhigga ama dumarka ragga iska dhiga).